Torohevitra sivy hikolokoloana ny vavony – jEreo Ato
Torohevitra sivy hikolokoloana ny vavony
Publié le 1 juillet 2019 1 juillet 2019 - 2 minutes de lecture Catégories SantéÉtiquettes Torohevitra, Vavony
1- Mikolokolo ny nify
Ny fahasalaman’ny ativava sy ny nify dia misy fiantraikany be amin’ny fandevonan-kanina. Raha ohatra isika ka misy olana ara-nify (oli-manara, sns) dia tsara indrindra ny manantona mpitsabo nify na dentiste satria misy akony amin’ny vavony izany.
2- Tsakoina tsara ny sakafo
Ny tsy fitsakoana tsara ny sakafo alohan’ny hitelemana azy dia mety hampaharary ny vavony. Ny mety indrindra ary dia sakafo efa ranony mihitsy no tonga ao anaty vavony. Ankoatr’izay, mampitombo lanja ny tsy fitsakoana tsara ny sakafo satria elaela kokoa vao voky.
3- Halaviro ny alikaola
Tsy ny alikaola ihany fa na sigara na zava-mahadomelina hafa dia manimba ny vavony. Ireo zavatra ireo ihany koa dia mampitombo ny risika hahazoana homamiadana. Tsara ialàna sy halavirina izany izy ireny raha te hanatsara ny vavony isika.
4- Ialao ny sakafo matavy sy mamy loatra
Ny sakafo tiana lazaina eto dia ny sakafo endasina (ovy, sns), sandwich, pizza, soda, sns. Ny fihinanana ireo matetika dia tsy tsara ho an’ny vavony. Satria tokoa mantsy ireo sakafo ireo dia mampitombo ny tahan’ny asidra ao amin’ny vavony izay mankarary azy izany.
5- Ialao ny fitsakotsakoana ivelan’ny sakafo
Raha tsy mitsahatra ny mihinana isika, izany hoe mitsakotsako mandrakariva eny anelanelan’ireo sakafo lehibe telo dia tsy ho afaka maka aina ny vavony. Manan-danja tokoa mantsy ny fakan’ity taova ity aina sady mahasoa ny vatana ihany koa.
6- Misotro rano foana
Mba hizotra am-pilaminana ny fandevonan-kanina dia ilaina ny misotro rano mandritra ny andro. Manarak’izay dia mampiverina ny fifandanjana eo amin’ny asidra sy bazy ao anaty vavony ny rano. Tsara indrindra raha rano mineraly ahitana manieziôma sy bicarbonaty no sotroina raha misy.
7- Ahena ny fisotroana dite na cafe
Raha mpakafy dite na cafe ianao dia tsara ahena ny fisotroana azy ireo satria mety mahatonga ny vavony harary. Ho an’ireo tena tsy miala eo mihitsy moa izany, fa azo atao tsara no misotro dite na cafe rehefa voalanjalanja tsara kosa.
8- Ahena ny rarin-tsaina
Ny aretim-bavony na aretin-kibo sasany dia avy amin’ny rarin-tsaina indraindray. Ny mety indrindra dia ny mandamin-tsaina mba tsy hijanona ao amin’ny vavony ny aretina.
9- Tazomy amin’ny antoniny ny lanja
Tsy dia tsara amin’ny taovam-pandevonan-kanina ny lanja avo be. Tsy tsara amin’ny fahasalamana ankapobeny ihany koa anefa. Mety mahatonga aretina maro. Aleo tsinjovina hatrany izany ny lanjantsika.
— François René de Chateaubriand
Jeff Bezos pourrait partager sa fortune en deux à cause d’un divorce
Economie bleue : une opportunité économique pour les pays africains
Japon : Un grand requin blanc mort, étouffé par une tortue géante
Etats-Unis: Bill Shine démissionne de la Maison Blanche